Baphendule igaraji inkulisa yabantwana | IOL Isolezwe
Baphendule igaraji inkulisa yabantwana
Isolezwe / 24 May 2012, 11:44am /
UNksz Mpu Ntuli (ongakwesokunxele) noNksz Nonhlanhla Ngubane nezinye zezingane ezifunda enkulisa.	Isithombe: PATRICK MTOLO
UTHANDO lwabantwana nesifiso sokubabona behleli endaweni ephephile kudale ukuthi umama nendodakazi baseMlazi baphendule igaraji labo inkulisa.
Uma umi ngaphandle kwekhaya lakwaNtuli kwa-N eMlazi uzwa ukuchwaza kwezingane ezincane okukubingelela usangena esangweni.
UNksz Nompumelelo “Mpu” Ntuli (28) uthe uhleko lwabantwana nokugcwala kwabo egcekeni yimpilo asebeyijwayele kuleli khaya.
Zazigcwala igceke nangaphambi kokuvulwa kwenkulisa abayivule nomama wakhe uNkk Thoko Ntuli (65), ebizwa ngeNtokozo Creche and Day Care Centre.
“Umama ubevame ukuzwa omama bezingane abasuke beze emtholampilo oseduze bekhala ngokuthi abanamuntu abangashiya kuye izingane zabo uma bethola amatoho ngoba izinkulisa zikude kakhulu kunabo,” kusho uNksz Ntuli.
Umama kaNksz Ntuli owayenguthishanhloko esikoleni samabanga aphansi, iSithokoziso eMlazi waveza isifiso sakhe sokubasiza laba bantwana okwaholela ekutheni igaraji lakulo muzi liphendulwe inkulisa.
Yize kube ngumcabango obe khona kudala uze waphumelela ngoFebhuwari kulo nyaka.
Esikhathini esincane beqalile ukusebenza sebethole ukwesekwa emphakathini abasebenza kuwo.
“Siqale ngezingane ezintathu ngoFebhuwari kulo nyaka, manje sezinezingane ezingu-35. Umphakathi wakule ndawo uyayiseka inkulisa futhi siyabonakala isidingo sayo,” kusho uNksz Ntuli.
Njengoba inkulisa isezinhlelweni zokubhalisa noMnyango wokuThuthukiswa koMphakathi kuyaphoqa ukuthi konke abakwenzela inkulisa bakwenze beshaya emaphaketheni abo.
Ukudla nakho konke kuthengwa yibo, bakhokhele nothisha ababili abayisipesheli, abaqeqeshelwe ukuhlala nabantwana abancane.
UNksz Ntuli uthe bakubona kumqoka ukuthi bathole abantu abaqeqeshiwe nabasaqhubeka nokuzicija ezifundweni zokunaka abantwana ukuthi kube yibo abenza lo msebenzi ngoba ukuthatha noma ngubani kungaholela ekuhlukumezekeni kwezingane.
“Kubalulekile kithina ukuthi izingane zifunde futhi zihlale endaweni enemfudumalo. Uma uthatha umuntu ongacijiwe ekubhekeni abantwana abancane bagcina sebehlukumezeka uzwe sekuthiwa bayashaywa,” kusho uNksz Ntuli.
Uthe umuntu oqeqeshiwe ekubhekeni abantwana uyazi ukuthi zikhona ezinye izindlela zokubuyisela ingane emgqeni ungasebenzisanga induku.
Njengamanje othisha babantwana uNksz Nonhlanhla Ngubane noNksz Wendy Zama.
Izifiso zikaNksz Ntuli nonina azikafezeki ngokuphelele, ngenxa yokwanda kwabantwana. Bafisa engathi bangabahlukanisa ngeminyaka ngoba izinto abazifundayo zihlukaniswe ngokweminyaka.
Okunye ngukuthola ibhodi elilotshwe igama lenkulisa elizocacisa nakunoma ngubani odlulayo ukuthi banenkulisa.
Lapho izinkulisa eziningi zimba eqolo eyabo bazamile ukuthi ingabizi ngoba iningi labazali abathembele kuyo bahola isibonelelo sabantwa-na, abanye babamba amatoho.